Abenzi basechina i-Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) kunye nabathengisi | UDehua
I-Chlorinated polyvinyl chloride luhlobo olutsha lwezinto eziphezulu zokwenziwa kunye nobunjineli beplastikhi.Iveliswe ngokuphendula phakathi kokuchazwa kwe-polyvinyl chloride kunye neklorine phantsi kwemitha ye-ultraviolet.
Uphawu olungaqhelekanga lobumbano lweemolekyuli kunye nokuqina kuya kwanda xa i-chloride ye-polyvinyl chloride ichlorated. Ukunyibilika kunye nokuzinza kweekhemikhali kubhetele, ukuze kuphuculwe ukuxhathisa kobushushu kunye nokumelana, ukumelana ne-asidi, ukumelana nealkali, ukumelana netyuwa kunye nokumelana ne-arhente ye-chlorination. Ukuphucula ukumelana nobushushu kunye neempawu zobuchwephesha. Umxholo we-chlorine unyuswe ukusuka kuma-56.7% ukuya kuma-65 ukuya kuma-72% .Ukuthambisa ubushushu beVicat kunyuswe ukusuka kuma-72 ukuya kuma-82 ukuya kuma-90 ukuya kuma-138 ℃. Kungafikelela kwi-110 ℃ ubukhulu, ukuya kuthi ga kuma-95 ℃ kubushushu obuhlala ixesha elide. I-CPVC (iklorin polyvinyl chloride) luhlobo olutsha lweplastiki kunye nokusetyenziswa okubanzi kwixa elizayo.
Umba Iyunithi Ukucaciswa
Inkangeleko Umgubo omhlophe —
Umxholo weChlorine WT% 65-72
Ubushushu bokubola kobushushu ℃> 110
Vicat ubushushu obuthambileyo ℃ 90-138
I-1.CPVC inokusetyenziswa ikakhulu kwizinto ezizodwa ezinje ngemibhobho yokufudumeza, umbhobho, izixhobo zokubumba njl njl.
2.CPVC nayo ingasetyenziselwa inki yoshicilelo, ukutyabeka anti, i-PVC yokuncamathelisa njl.
Ii-CPVC ziyimveliso yekhemikhali yokucoceka okuphezulu ngaphandle kwentsalela yetetrachloride kwaye ayinabungozi, ayinetyhefu, idangatye ilindile, izinzile kwaye ayinabungozi emzimbeni womntu.
Egqithileyo Ukuthambisa iAlicrylic yokuNceda ukuNceda iimveliso zePVC
Okulandelayo: Chlorinated ngerabha (CR)